Newlytics: Newzọ ohuru iji ghota ahia gi | Martech Zone
Ebe anyị na ọtụtụ obere na nnukwu ụlọ ọrụ gafee ọtụtụ ụlọ ọrụ na mgbasa ozi dịgasị iche iche, anyị na-ahụkarị nsogbu bụ isi nke ụlọ ọrụ na-enweghị ike ịchọpụta ROI ahịa ha. Ọbụna na nnukwu ụlọ ọrụ ndị na-eji ọtụtụ ndị na-ere ahịa nwere ọtụtụ afọ ahụmahụ, enwere ike ịgbaso nsonaazụ ozugbo na mmefu.
Ọ bụ ezie na ụzọ azụmaahịa dijitalụ dịka mgbasa ozi PPC nyere ndị mmadụ ohere ịkọpụta ihe dị n'etiti mmefu ha na nloghachi ha, ọtụtụ ụlọ ọrụ na ndị mmadụ anaghị eji data ha nwetara eme nke a nke ọma.
Nsogbu bụ isi bụ na ọ bụ ezie na data dị n'ọtụtụ ọkọnọ, ikike ịghọta ya abụghị, a na-echekarị echiche na-ezighi ezi (dịka ịnwe ndị na-eso ụzọ 10 000 na ibe Facebook anyị bụ ebumnuche ma ọ ga - eme ka ahịa baa ụba).
Newlytics Tracks ahia ROI
Ya mere, iji nyere aka dozie nsogbu a, anyị malitere ịmepụta usoro iji rụọ ọrụ maka ndị na-ere ahịa. Ihe bụ isi nke Newlytics dị mfe; ị bulite mmefu ego maka ọrụ ahịa dị iche iche, jikọọ Newlytics na ụzọ ahịa gị, ọ na-ejikọ ntụpọ dị n'etiti mmefu gị na otu esi kee ụzọ.
Ga n'ihu n'ihu, Newlytics na-enye gị ohere ịre ahịa, ịchọpụta ọnụ ahịa ọ bụla na ọnụ ahịa ọrịre ọ bụla, ma jiri olulu anya iji chọpụta nke ụzọ na-enye gị nsonaazụ kacha mma.
Ndepụta na-eduga - Newlytics na-akpaghị aka na-eduga na-abanye na mkpokọta weebụ, na ntinye nke otu nsuso pixel. Trackingchịkwa nsuso na-enyekwa gị ohere ịchụso ahịa, soro otu onye soro websaịtị tupu iwepụta ndu, yana ịre ahịa kwa ụbọchị na ozi ndu.
Ahịa ahịa - Newlytics na-akpaghị aka na-esochi ebe ụzọ si abịa na otu onye ọrụ si etinye aka na weebụsaịtị tupu ya abụrụ onye ndu. Ahịa ahịa na-enye gị ohere iji anya gị hụ ebe mmefu gị na-aga, yana ebe ndị na-eduga na-abịa, na-eme ka ọ dị mfe ịchọta ụzọ kachasị mma iji tinye ego na azụmaahịa gị.
Njikọ na Nsoro nke Azọ - Newlytics links to Google Adwords, Mailchimp na akpaghị aka na-esochi isiokwu isiokwu maka ebe nrụọrụ weebụ gị. Mmekọrịta mgbasa ozi mmekọrịta na ụfọdụ ụzọ nzuzo ndị ọzọ dị ugbu a.
Ngwá Ọrụ Ndị Bara Uru - Dịka akụkụ nke nsuso ahịa, Newlytics tracks pịa gafee weebụsaịtị gị niile, yana data nyocha niile iji nye gị nkọwa nghọta dị mfe banyere etu websaịtị gị si eme. Ngwá ọrụ ndị a na ndu na nchịkọta ego na-enye gị nghọta siri ike banyere otu ị ga-esi nweta ahịa gị.
Akwụkwọ Asambodo - Newlytics agụnye gị n'ụlọnga asambodo maka ụlọ ọrụ ndị soro 10 ma ọ bụ karịa mkpọsa. Nke a mepụtara nnukwu ire ere iji gbakwunye na ngwa agha gị - ma gosi ndị ahịa na ị maara otu esi enweta nsonaazụ kacha mma maka ha. A ga-ewebata asambodo ndị ọzọ iji nyere aka ịiche ọkwa gị dị ka ụlọ ọrụ.
Newlytics na-akwadebe ugbu a maka nyocha beta nkeonwe. Naanị ịdebanye aha ma nwee ike ịnụ ụtọ ịnweta ụzọ ma nye aka na mmelite ikpo okwu tupu ewepụtara ya n'ihu ọha.
Debanye aha maka ndị ọhụrụ
Mkpebi Ego Pụrụ Iche
Na imepụta Newlytics, otu ebumnuche anyị bụ isi mepụta ikpo okwu nke na-adaba onye ọrụ ya na ọnụ ahịa zuru oke maka obere ma ọ bụ nnukwu ụlọ ọrụ ọ bụla. N'ihi nke a, Newlytics gụnyere nhọrọ FREE maka ịchụso otu mkpọsa, nke dị mma maka ndị nwe obere azụmaahịa.
Ndị ụlọ ọrụ na ndị ahịa buru ibu nwere ụdị ọnụego mgbanwe na-agbanwe nke na-enye ha ohere ịgbakwunye mkpọsa ọhụụ na-akparaghị ókè dịka na mgbe achọrọ ya.
Tags: gị n'ụlọngaụlọ ọrụ asambodonyocha ụlọ ọrụ nyochaasambodogoogle adwordsndu nchịkọtandu ndumailchimpahịa funnelsndị ọhụrụnsuso na-eduga